Mararka qaar marka aad aad sixiddiisa videos, aad rabto in aad ku darto subtitles qaar ka mid ah si ay u videos sidoo kale u fiican gudbiyo macnaha ama ka dhigi videos ayaa in ka badan shakhsiga.
Waxaa jira dad badan oo qalab Cinwaan kaas oo kaa caawin kara inaad ku darto iyo edit video subtitles. Hoos waxaa ku qoran liiska ugu wanaagsan ee 10 tifaftirayaasha Cinwaan u video tafatirka. Eeg oo u hesho qalabka Cinwaan weyn in aad ku darto oo xiiso dheeraad ah si aad u movie guriga qaadashada.
1. Cinwaan Workshop
Workshop Cinwaan waxaa loo arkaa inay qalab ugu wanaagsan lacag la'aan ah Cinwaan tafatirka la interface user-friendly ah. Waxaa si fiican u taageeraa oo dhan qaabab Cinwaan caanka ah sida dameer, DKS, SCR, hoosaadka, iwm sokow, waxa kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan, edit iyo badalo subtitles fudayd. Intaa waxaa dheer, u yimid qaar ka mid ah muuqaalada sare sida jeeg joogay, Falanqeynta video, iwm Kuwan muuqaalada weyn iyo xawaaraha iyo xasilooni weyn, Cinwaan Workshop qaadataa waqti yar si xaalkaa subtitles oo helay abaal marinta ee dunida oo dhan. Ogow in ay sidoo kale la jaan qaada Windows Vista.
Jubler waa qalab qoraal ku salaysan Cinwaan tafatirka. Waxaa la isticmaali karaa si ay u abuuraan subtitles cusub ama in la saxo, nadiifin, beddesho iyo badalo subtitles jira. Sida Cinwaan Workshop, Jubler sidoo kale taageertaa oo dhan qaabab Cinwaan joogto ah. Tani editor Cinwaan free yimaado la isku geynta ayna ah inuu kaa caawiyo inaad hagaajin markii iswaafaqla'aan ka. Ka sokow, aad si xor ah u hagaajin karo midabada subtitles, hubi higaadda, dooran hab turjumidda, iwm hor inta subtitles badbaadiya, waxaad tijaabin kartaa subtitles isticmaalaya MPlayer. Jubler shaqeyn karaan in Windows, Mac iyo Linux.
SubtitleCreator waa editor a free Cinwaan kuu oggolaanaysa in aad subtitles daro in DVD aad. Waxaa loogu badalo karaa SRT ama text hoosaadka files ASCII ku salaysan in qaabka SUP binary iyo gelineya inaad bedesho midabka ah ee subtitles jira. Waxaa la iman ah DVD qoraalka Wizard function hidi, kaas oo kuu ogolaanaya in aad ku darto subtitles ku cusub DVD oo ay horay u soo guuriyeen. Version ugu dambeeyay taageertaa karaoke.
4. Open Cinwaan Editor
The editor Cinwaan lacag la'aan ah waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan. Video tafatirka iyo hawlaha tafatirka Cinwaan sida turjumaad subtitles, video resyncing, subtitles ku daray oo ay ka saareen, iwm waxaa la siiyaa. Waxa kale oo aad xor u tahay inaad ku darto subtitles cusub in kasta oo videos.
SubMagic waa aalad video Cinwaan free weli awood badan. Waxaad si xor ah u bedeli karaan, edit iyo kor loogu qaado video subtitles. Agtooda, subtitles function turjumidda waxaa kaloo la siiyaa.
6. iToolSoft Movie Cinwaan Editor
iToolSoft Movie Cinwaan Editor waa editor kama dambaysta ah Cinwaan badan oo fursado u subtitles tafatirka. Barnaamijkan ayaa waxaa gudoonsiiya softonic.com iyo software.informer.com u software nadiif ah (fayrusyada No, No adware, spyware No)
Subtitles movie Edit
Taageerada samaynta subtitles soo galeen filimka
Samee subtitles dheeraad ah oo kala duwan oo ay la qabsado heerka yara iyo ratio xal.
Edit dhammaan noocyada kala duwan ee goobaha loogu subtitles sida sida typeface, midabka, iyo goobta.
7. POP Cinwaan Editor
POP Cinwaan Editor waa qalab aad u sahlan in la isticmaalo si ay u qoraan iyo dar subtitles in qaab filim sida wmv, MPEG, AVI ama QT file video kasta.
Subtitles Edit halka movie previewing
Habee style font, font size, midabka font iyo Jagada subtitles ee shaashadda.
Hal-click movie jiilka la subtitles
8. Video Cinwaan Editor
Video Editor Cinwaan waa aalad hanashada in xaalkaa subtitles u filimada iyo TV muujinaysaa aad si fudud oo waxtar leh.
Interface awood leh oo si sahlan loo isticmaali karo.
Taageerada dhow qaabab kasta video sida iPod, wmv, DivX, AVI, MPEG, XviD, MP4, dhexena, 3G2, MOV, MPEG-4, iwm
Movie Edit subtitles iyadoo ay xulashada Customization sida style font, font size, font midabka iyo Jagada subtitles ee shaashadda.
Taageerada loogu talagalay filimada iyo filimada videos leh tayo sare iyo xawaaraha dhakhso diinta ka mid qaab si kale iyo
Dhimi karo video weyn yar video clips
Womble EasySub waa aalad Cinwaan editor u DVD.
Taageerada loogu abuuro, sixiddiisa iyo maaraynta qoraalka Cinwaan gudahood DVD video files.
Waxay leedahay muuqaal ah ciyaaryahanka gundhig u sixiddiisa Cinwaan oo uu u arko saameynta ku-wakhtigaas.
Falanqeynta markii Real kaloo ka caawisaa in waafajinta Cinwaan la gabal cod.
Taageerada loogu soo degida files Cinwaan jira ka dibna waxaa isku dubaridi sida wareegaayo mar ama isbeddel luqadda.
Taageerada loogu talagalay qoraal Cinwaan in DVD.
Aura Video Editor waa editor a video buuxa ciyaaray oo si sahlan loo isticmaalo la dhisay editor Cinwaan.
Jiid oo dhibic video tafatirka
Taageerada loogu daray subtitles in filimada ama videos.
Habee subtitles la saamaynta kala duwan sida aad u bedeli kartaa nooca font, midabka iyo booska iyo sidoo kale saamaynta guurka.
Falanqeynta markii Real kuu ogolaanaysaa inaad aragto video hor badbaadinayo video leh saamayn kartoo.
> Resource > Video > Top 10 Cinwaan Editor Tools for Your Video Faalladaada